Please visit our website www.kmd.com.sg Home
Following products and specification are may be change with (or) without prior notice.
World No. 1 Brand for Optical Media
အရည်အသွေး အကောင်းဆုံး Optical Media Products များကို မည်သူမှမပေးသော အာမခံချက်ဖြင့် KMD တွင် လက်လီ/ လက်ကား ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
3.5 " External HDD [ 18 months warranty ]
ပမာဏကြီးမားလှတဲ့ဖိုင်တွေကို သိမ်းဖို့သာစိတ်ဝင်စားပြီး၊ မဖျက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Verbatim ရဲ့ High Capacity External HDD တွေက သင့်ရဲ့လိုအင် ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါလိမ့်မယ်။
2.5 " Portable HDD [ 18 months warranty ]
ပမာဏကြီးမားလှတဲ့ Media ဖိုင်တွေနဲ့၊ အရေးကြီးအချက်အလက်များကို ဘယ်နေရာသွားသွား ထည့်သွင်း သိမ်းဆည်းသွားနိုင်ဖို့အတွက် ဒီ Protable HDD လေးကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Data တွေကို အလွယ်တကူ Backup လုပ်နိုင်ဖို့ Nero BackUp Software [License] ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Thumb Drive / Micro Drive [ 18 months warranty ]
အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးနှင့် ဒီ Thumb Drive လေးတွေမှာ မတော်တဆ ကျပျောက် ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ့်ရဲ့ အရေးကြီးအချက်အလက်များကို သူများတွေမကြည့်ရှုနိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ Password Protection Software ပါရှိပြီး Vista Ready Boost သုံးမယ်ဆိုရင်လဲ သုံးလို့ရပါတယ်။ Micro Drive လေးတွေကတော့ သေးငယ်တဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ ကြီးမားတဲ့ စွမ်းဆောင်မှုရှိနေတာတော့ အံမခန်းပါပဲ။
SD & HC-SD Card [ 18 months warranty ]
Micro SD Card [ 18 months warranty ]
လက်ကိုင်ဖုန်း၊ Digital Camera နဲ့ Video Camera အသုံးပြုသူတွေအတွက် အမှန်တစ်ကယ် အသုံးဝင်စေမဲ့ Micro SD Card တွေဖြစ်ပါတယ်။ Memory အနည်းမှ အများအထိ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး သာမန် Card Reader တွေနဲ့ ဖတ်နိုင်ဖို့အတွက် Adapter တစ်ခုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Gaming Mouse [ 18 months warranty ]
Verbatim ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Gaming Mouse ဟာ Botton တစ်ခုချင်းစီကို စိတ်ကြိုက် Setting လုပ်ထားနိုင်ပြီး Sensitivity Level ကိုလည်း ခလုတ်လေးတစ်ချက် နှိပ်ရုံနဲ့ ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ Mouse ရဲ့အလေးချိန်ကို လိုသလို အတိုးအလျော့ပြုလုပ်နိုင်သေးလို့ Game ကစားရာမှာ တစ်ဘက်ပြိုင်ဘက်ကို အသားစီး ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
DVD 9, Double Layer[ Three months warranty ]
DVD9လို့လူသိများတဲ့ DVD Disc ကိုတော့ Double Layer DVD လို့ခေါ်ပါတယ်၊ DVD9တစ်ချပ်တည်းနဲ့တင် Data ပမာဏ 8.5 GB Memory အထိ သိပ်ဆည်းထားနိုင်ပြီး Movie အနေနဲ့ 240 Minutes အထိ ကူးယူကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားညံ့တဲ့ DVD9တွေကြောင့် မကြာမခဏ မိမိရဲ့ မှတ်တမ်းတွေ ပျောက်ပျက်သွားလို့ စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Verbatim DVD9Double Layer က ကူညီဖြေရှင်း ပေးပါလိမ့်မယ်။
Printable Inkjet Disc [ Three months warranty ]
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပုံ လှလှလေးတွေကို Dsic ပေါ်မှာကာလာစုံစုံလင်လင်နဲ့ ပုံဖော်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Printable Inkjet Disc ကိုသင်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အရည်အသွေးကောင်းပြီး အကုန်အကျလည်းမများလို့ မိသားစုအမှတ်တရ အခွေတွေပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Printing စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကုမ္ပဏီ Profile Disc တွေပြုလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Light-Scribe Disc [ Three months warranty ]
သင့်ရဲ့အမှတ်တရ အခမ်းအနားတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Quality ကောင်းတဲ့ CD/ DVD တစ်ခုပေါ်မှာတော့ Recording လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ဒီမှတ်တမ်းတွေပျက်စီးသွားလို့ ဒီလူ၊ ဒီအချိန်၊ ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ နောင်တစ်ချိန်မှာ ပြန်မှတ်တမ်းတင်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး Light-Scribe Support လုပ်တဲ့ DVD Writer ရှိရုံနဲ့ သင့်ရဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို Disc ပေါ်မှာ Laser နဲ့ပုံဖော်နိုင်တဲ့ Light-Scribe Disc က သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။
Blank CD/ DVD Disc[ Three months warranty ]
အရည်အသွေးညံ့ CD တွေပေါ်မှာရေးထားတဲ့ သင့်ရဲ့ Data အချက်အလက်တွေဟာ သင်အပြင်သယ်သွားရင်း နေရောင်ဒဏ်ခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခန်းတွင်း အပူရှိန်မြင့်မားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်မရွေး ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ Verbatim ကတော့ ဒီလိုမဖြစ်အောင် AZO Dye နည်းပညာကို အသုံးပြုထားလို့ အပူဒဏ်နဲ့ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
Verbatim is one of the unit trademark of MITSUBISHI Corporation / Japan.
Trademarks : KMD Sale and Service Centre, KMD Desktop Units and KMD logo are trademarks of KMD. © 2009 KMD. All right reserved.